Inona ary ity nataonao ity ? Fa angaha moa tsy hamaha ny hanoananay ao anatin’ny fotoana fohy no nametrahanay anao eo ? Iny aloha izany vita ny fandinihana an’ilay lalàna mikasika an-dry zalahy hoe tsy manaiky ny drafitsika. Dia ohatra ireny soavaly tapa-kofehy ireny ve rangahy ianareo vao nandre fa tsy nolavina ilay izy na dia naato aza aloha ny dinika momba azy ! Io anie efa fantatray fa hainareo ilay manao hoe “inona akia no idirako ?” rehefa sendra ny ho ahy aho e ! Fa mba vahao aloha, hoy aho, ity hanohananay ity.